Taariikhda My Butros » Maxaa Twitter Waxaad bari kartaa saabsan Love?
Maalmahan, baraha bulshada, waa badan tahay meelaha ay dadku ku qaataan waqtigooda inta badan marka ay yihiin lacag la'aan ah.
Iyadoo ay run tahay in inta badan waqtiga ku qaatay warbaahinta bulshada soo baxday in ay waxtar lahayn oo dhan chitchats barobagaando iyo xanta, waqtiyo dadku barashada waxyaalo badan oo xiiso leh oo muhiim ah ka websites kuwaas. Tusaale ahaan, waxaa jira bogag shabakad bulsho kuwaas oo bixiya cuntada cusub oo cusub, bogagga in dadka baraan oo ku saabsan isbeddellada fashion ugu dambeeyey, iyo wixii la mid ah.
Markaas, waxaa jira qaar ka mid ah casharada mid ka baran karaa oo keliya by isagoo user joogto ah shabakadda bulsho; hoos ku jira qaar ka mid ah casharada jacaylka site micro-hubkaa Twitter bara.
1. Love ma aha oo kaliya ku saabsan wada joogi:
Tani waa mid cashar Miley Cyrus na siiyey iyada oo loo marayo Twitter inta lagu jiro iyada weyni ka saaxiibkaa la Justin Gaston ee February, 2011. Dhawaaqayay weyni ka on site micro-hubkaa ah, Cyrus ayaa sheegay in jacayl run ma yeelan karaan dhammaaneysa ah ugu faraxsanahay sida aan marnaba dhamaado jacayl run.
Xiddiga hore ee taxane telefishan Hanna Montana ku daray in siideyn waa hab kale oo ku muujiyaan jacaylka. Tani waa cashar weyn jacayl dhan, dhallinyaro ama duq.
Haddii aad jeclaan qof, waa in aad taqaanaa sida loo ha isaga / iyada u tegi. Haddii qofka uusan rabin in uu sii wadi doono inuu jecel ama ha idinla, marna waa in aad rabto in aad isaga / iyada sameeyo in si khasab ah; taasi waa sababta oo ah haddii aad jeclaan qofkaasi, Sida xaqiiqada ah waxaad u baahan doontaa si aad u aragto isaga / iyada ku faraxsan.
2. Waxaa jira waxyaabo qaarkood waa in aad sheegi weydo marka waqti aad lammaanahaaga:
Dhawaan waxaa jiray tag hash a Trending on Twitter in ka caawiyay dad aqoon ku saabsan waxyaabaha ay tahay in aan la sheegay in taariikhda a. Tag hash ayaa u dhaco sidan oo kale: #FiveWordsToRuinADate.
Users posted tiro ka mid ah talooyin ku saabsan erayada burburisay karaa taariikh. Qaar ka mid ah talooyinka kuwa ahaayeen runtii haboon in la xasuusnaado.
Tusaale ahaan, Matt Lieberman, waa kuwa ciidan ee TV AfterBuzz, qoray in sida isaga in shan eray in burburisay karaa taariikh yihiin “aad dhunkato sida Adeerkay”. Maxaa Lieberman doonayay in la yidhaahdo waxa uu ahaa qalad weyn in ay ka hadlaan xidhiidhada ee la soo dhaafay aad hore ee jacaylka aad xiisaan.
Tusaale kale waa tweet ah by Jeff Drake, qoraa. The shan eray faydmaan, sida laga soo xigtay isaga si, waa “hooyaday nagaga karaan”. War Tani waxay noqon kartaa spoilsport weyn haddii muuqa marka waqti aad lammaanahaaga, gaar ahaan haddii aad tahay nin.
Haa, Sida xaqiiqada ah waxaad xaq u leedahay in aad hooyaday jeclahay, laakiin gabdhaha ugu neceb si ay u arkaan ninka ay nolosha keeno tixraaca ee ay hooyadeed ama xataa wax badan oo ku saabsan iyada hadlaya.
Gala #FiveWordsToRuinADate tag hash ka qaado sudhaan search Twitter; waxaad ka heli doontaa si aad u aragto talooyin badan oo ay ka mid xiiso iyo waxtar leh.
3. Wax Little samayn kartaa yaabab:
Jacaylku waa ku saabsan wax yar; at doodaha ugu yaraan on Twitter si soo jeedin. Tusaale ahaan, a Tweet by Patama Posts soo jeedisay in gabdhaha jeclahay waayo-aragnimo ah ee Masaarida ka dib markii.
Kuwani yar wax ka dhigi kartaa dareenka lammaanahaaga la jecel yahay iyo Twitter bara badan oo iyaga ka mid ah.